IPhone-ka ayaa u dabaaldegaya sanad guuradiisii ​​tobnaad, sidan ayaa 10-kan sano ay ahaayeen | War gadget
Luis Padilla | | Mobiles, Noticias
In kasta oo ay umuuqato inay nala joogtay nolol dhan, iPhone-ka ayaa jira 10 sano oo keliya. Taleefanka casriga ah ee ugu caansan adduunka taasina waxay beddeshay fikradda casriga ah waxay u dabaaldegeysaa sanadguuradeedii 8aad iyada oo ay jiraan warar xan ah oo ku saabsan sida iPhone XNUMX ee soo socda uu u xusi doono dhacdadan.
Qofna shaki ugama jiro hadda guusha qalabkan, ama inuu u adeegay waxay horseed u tahay soosaarayaasha kale kuwaas oo, sanadba sanadka ka dambeeya, bilaabaya "iPhone Killer" wareejin Laakiin bilowgeedu sidaa uma guuleysan, abuuritaankeeduna wuxuu ahaa waddo cadaab daran oo ay ka buuxaan isbadalo taas oo aakhirkii keentay wax soo saarkii ugu guusha badnaa ee taariikhda u horseeday Apple inay noqoto astaanta ugu qiimaha badan aduunka.
1 Nacayb u dhashay Microsoft
2 Motorola Rokr, isku daygii ugu horreeyay ee Apple
3 IPod wuxuu ahaa aabaha iPhone
4 Mashruuc qarsoodi ah oo guurka ku kacaya
5 Hordhac soo dhaweyn aad u diiran leh
6 Toban sano oo isbeddel joogto ah oo isku ruux ah
7 Isbeddelka iPhone-ka sannad ka sannad
8 Laga soo bilaabo iPhone OS ilaa iOS 10, toban sano oo horumar ah
9 Toban Sano oo Guul aan lala tartamin ah
10 Toban sano oo dhalaalaya laakiin sidoo kale leh hooska
11 IPhone 8, talaabada xigta
Nacayb u dhashay Microsoft
Apple kuma shaqeyneyn taleefanka gacanta ee taabashada ah laakiin wuxuu ku shaqeynayay kiniin. Hawl fulin ka socota Microsoft waxay u sheegtay Steve Jobs shaqada ay ku qabanayaan kiniiniyada iyo qoraalka, iyo Jobs, oo neceb stylus sida aan ku arki karnay soo bandhigida IPhone-ka asalka ah, waxay ku laabteen Apple iyagoo go'aansaday inay muujiyaan waxa lagu qaban karo kaniiniga, iyagoo bilaabaya horumarinta iPad-ka.
Muxuu ahaa waxa ka dhigay Steve Jobs inuu go’aansado inuu soo jeesto oo uu bilaabo horumarka iPhone? IPad-ka wuxuu bilaabay in la soo saaro ka hor iPhone-ka, hase yeeshee lama sii deyn ilaa saddex sano ka dib iPhone-kii ugu horreeyay. Isbedelkan istiraatiijiyadeed wuxuu u sabab ahaa dhaawaca taleefannadu ay u geysan karaan iibka iPod. maadaama dad aad iyo aad u tiro badani ay u adeegsadeen inay dhagaystaan ​​muusigga. Jobs, oo horey u arkay demo ka mid ah barnaamijka uu Scott Forstall u sameeyay iPad-ka, ayaa ka codsaday inay hoos u dhigaan oo ay bilaabaan inay ka shaqeeyaan iPhone-ka, iyagoo dhinac iska dhigaya horumarinta iPad-ka.
Motorola Rokr, isku daygii ugu horreeyay ee Apple
In kasta oo wax waliba Steve Jobs uu weli shaki ka qabay taleefanka cusub. Kalsooni buuxda kuma qabin in Apple uu ku guuleysan doono taleefanka sababo badan oo ka baxsan awoodiisa, mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn ayaa ah kuwa ka shaqeeya taleefanka. Apple looma baranin inay marto shirkad kale, iyo taleefanka gacanta waxaa gacanta ku hayey Mareykanka dhowr shirkadood oo wax walba ku qaban jiray sida ugu fudud. Verizon iyo AT&T waxay ahaayeen kuwa xakameynaya aaladaha gala shabakadooda, la'aantoodna ma jiro taleefan casri ah oo guuleysanaya
Waxaa laga yaabaa inay taasi tahay sababta Apple ay ugu dhowaansho ugu dhowaatay shirkadda Motorola, oo ah shirkad ay horayba u tixgelisay inay la soo wareegto laakiin qiimaheeda xilligaas uu aad ugu sarreeyay fursadaha kuwa ku jira Cupertino. Motorola waxay xilligaas suuqgeynaysay Razr-ka, taleefan leh naqshad ay shaqooyinku aad u jeclaayeen, iyo xiriirkii wanaagsanaa ee ka dhaxeeyay labada shirkadood wuxuu kudhamaaday Motorola oo leh iTunes player isku dhafan: Rokr. At Apple waxay ogaayeen in taleefankani uu yahay qashin dhab ah, laakiin wuxuu qabtay shaqadiisa: u ogolaanshaha Steve Jobs inuu ururiyo macluumaadka ku saabsan sida hawl wadeenadu u shaqeeyaan.
IPod wuxuu ahaa aabaha iPhone
Khibrad u lahaanshaha iTunes-ka taleefanka waqtigaas ayaa ka caawisay Apple inay ogaato in tani aysan ahayn jidkii loo mari lahaa. Cidina ma jecla wax soo saarka ugu dambeeya, wixii ay ku cadaanayeenna waxay ahayd in hadii iPod-ka uu guuleysan lahaa waqtigaas, wadada ay ahayd in iPod-ka loo badalo taleefan. Mike Bell oo shirkadda la shaqeynayay muddo 15 sano ah ayaa Steve Jobs ku qanciyay muddo bilo ah inay ku qasban yihiin inay taleefoon dhisaan guul la'aan badan, laakiin Jony Ive wuxuu la muuqday naqshadihiisa.
Habeen habeenada ka mid ah ayaa Bell soo wacay Jobs si uu ugu sheego inay horeyba uga caddaayeen taleefanka Apple sida uu noqonayo. Jony Ive wuxuu nashqadeeyay iPod-yada mustaqbalka ee aan cidina arag, iyo inuu cadeeyay inay tahay inay sameeyaan waxay ahayd inay qaataan mid ka mid ah nashqadahaas oo ay dhigaan barnaamijka Apple-ka halkaa, oo aan la isku dayin in barnaamijka lagu dhejiyo taleefannada dadka kale. Habeen dheer kadib Shaqooyin ayaa loo baneeyay mashruucii iPhone-ka.
Mashruuc qarsoodi ah oo guurka ku kacaya
Sidaas ayaa ay ku bilaabatay mashruucii ugu hanka weynaa ee shirkadda ilaa maanta. Maamulayaasha sare ee Apple way ka warqabeen inay wajahayaan shey fure u noqon doona koritaanka shirkadda, runti Steve Jobs laftiisu wuxuu ku sheegay soo bandhigidiisa inuu ku wajahan yahay mid ka mid ah waxyaabahaas oo taariikhda beddeli doona. Laakiin waxay fure u ahayd inaysan jirin wax daadinaya, tanna waxay ahayd inay doortaan kuwa ugu fiican uguna kalsoonida badan.
Jobs wuxuu u sheegay Forstall inuu ka dooran karo injineero kasta oo uu ka doonayo shirkadda dhexdeeda, laakiin uusan jirin cid ka baxsan. Khatar ugama jirin inay soo saaraan wax yar oo ka daadan kara badeecada cusub ee shirkadda, oo shaqada si rasmi ah u bilaabatay 2004tii. Shaqaalaha Apple ayaa hadda soo sheegaya inay si lama filaan ah u arkeen qaar ka mid ah injineerada si lama filaan ah uga lumay shaqooyinkoodii, iyadoo aan la ogeyn halka ay aadeen. Kaliya dhowr saraakiil Apple ah ayaa yimid, si gaar ah ayey ula hadleen, si lama filaan ahna dib uguma noqon shaqadoodii caadiga ahayd. Iyagu waxay ahaayeen kuwa ugu fiican, kuwa ugu ifaya, laakiin waxay bixiyeen qiimo.
Waxaan bilaabaynaa mashruuc cusub oo qarsoodi ah oo aanan kuu sheegi karin wuxuu ku saabsan yahay. Kuuma sheegi karo cidda aad u shaqeyn doontid. Waxa kaliya ee aan kuu sheegi karo ayaa ah haddii aad shaqadan qabato, waxaad u shaqeyn doontaa si ka adag noloshaada oo dhan. Waa inaad shaqeysaa habeen iyo maalin, xitaa dhammaadka usbuuca, ugu yaraan laba sano.
Injineerada qaar waxay xaqiijiyeen dhowr sano kadib in taleefanka iPhone-ka ay ku kiciyeen guurkooda, sida Andy Grignon. Waxay ahayd shaqo aad uxun, malaha waqtigii iigu xumaa noloshayda. Waxay qaateen xoogaa injineeradii ugu fiicnaa, waxayna ku xilsaareen mashruuc aan macquul aheyn, oo leh taariikh aan la heli karin oo dhamaad ah, waxaana loo sheegay in mustaqbalka shirkaddu ku tiirsan yahay. "
Hordhac soo dhaweyn aad u diiran leh
Apple waxay soo saartay iPhone-ka 2007-dii laakiin dhaleeceynta ayaan ahayn mid aad ugu habboon shirkadda. Kaamiro 2Mpx ah, oo aan lahayn isku xirnaanta 3G, oo aan lahayn Flash player iyo xulashooyinka qaabeynta gabi ahaanba xaddidan. Xitaa waad beddeli kari weyday dhawaaqa dhawaaqa ama warqadda gidaarka! Caadaysatay boosteejooyin kale oo badan oo la beddeli karo, iPhone-ka ma uusan qancinin inta badan 'geeks' xilligan, oo lagu daray qiimaheeda sare, waxba uma muuqan inay muujinayaan inay noqonayso guul. Sidoo kale, Bluetooth looma isticmaalin in lala wadaago faylasha! Bilaabisteedu waxay ahayd oo keliya Maraykanka iyo sidoo kale oo keliya hawlwadeenka 'Cingular operator'.
In kasta oo dhaleeceynta roobka meel walba ka da'ay, dad badan ayaa xaqiiqsaday in taleefanka Iphone-ka uu u imanayo inuu beddelo xeerarka taleefanka. Bal u fiirso sida naqshadda taleefanka gacantu u soo ifbaxay wixii ka dambeeyay 2007. Kiiboodhka jirka, mid ka mid ah furayaasha guusha boosteejooyinka Blackberry, ayaa si lama filaan ah looga waayey taleefannada casriga ah, iyo soo saarayaasha oo dhami waxay bilaabeen inay si badheedh ah u nuquliyaan nashqadda taleefanka ee Apple daabacaadyadooda cusub. Kuwii aan aqoonna sida loola qabsado waxay ku dhammaadeen lacag aad u badan shakigooda, sida Steve Ballmer laftiisu (Maamulaha Microsoft ee wakhtigaas) uu ku dhammaaday aqoonsiga sannado ka dib.
Toban sano oo isbeddel joogto ah oo isku ruux ah
Muddo toban sano ah iPhone-ku wuu is beddelayay, xagga naqshadeynta iyo xagga qalabka iyo softiweerka. Apple wuxuu ka gudbay xariiqyo badan oo casaan ah oo aanan waligeen ku fikirin inuu sameyn lahaa, sida shaashado waaweyn, u furitaanka barnaamijkaaga dhinac saddexaad ama xitaa bilawga iPhone RED. Laakiin nuxurku waa isku mid. Qof kastaa wuu soo qaadan karaa iPhone jiil kasta wuxuuna ku shaqeyn karaa min daqiiqad eber oo la aqbali karo.
Apple waxay ku guuleysatay inay horumariso xarunteeda si ay u sii ahaato tixraaca garaacista, in kasta oo xaqiiqda ah in tartanku uu yahay mid aad u adag oo soo saarayaasha ay sii kordhayaan soo saarista alaab ka wanaagsan. Intii lagu gudajiray tobankan sano waxaa jiray go'aano aad u muran badan, sida isbadalka laga sameeyay 30-pin Dock isku xiraha ilaa hillaaca hada socda, taasoo u horseedaysa isticmaaleyaal badan inay iska tuuraan qaar badan oo ka mid ah ku hadlahooda oo si gaar ah loogu talagalay iPhone. Ama goor dhaweyd, tirtirida qalabka dhageysiga dhageysiga adigoo ku sharraxaya tikniyoolajiyada wireless-ka oo ah hab dhageysiga muusikada
Isbeddelka iPhone-ka sannad ka sannad
iPhone (2007): qaabkii ugu horreeyay ee iPhone.
iPhone 3G (2008): isku xirnaanta 3G waxay u timaadaa iPhone iyadoo ay weheliso dukaanka arjiga ama App Store.
IPhone 3GS (2009): Apple waxay soo saareysaa kala duwanaanta "S" iyada oo xawaaraha lagu hagaajinayo iyada oo aan laga helin warar kale oo waaweyn.
iPhone 4 (2010): isbedelkii ugu horreeyay ee xagjirka ah ee iPhone-ka ayaa yimid, oo leh qaab bir ah iyo muraayad xagga hore iyo xagga dambe ah. The "Antennagate" wuxuu ka dhigayaa Apple inay baqdin siiso kuwa ka cabanaya luminta caymiska markii ay gacanta ku qaadanayaan iPhone-ka.
iPhone 4S (2011): naqshad la mid ah tii iPhone 4, oo leh awood dheeri ah iyo Siri, oo ah kaaliyaha ugu horreeya dalwaddii taleefanka gacanta, ayaa furmaya.
iPhone 5 (2012): wuxuu hayaa naqshad aad u la mid ah laakiin ka sii dheereysan, qaadashada shaashadda illaa 4 inji, wuxuuna soo bandhigayaa isku xiraha danabka oo baabi'inaya 30-pin Dock dhaqameed.
iPhone 5c iyo 5s (2013): Apple waxay sii wadaa dhaqankeeda ah inay nashqadaynta sii haysato sanad kale waxayna ku darsataa dareeraha sawirka faraha ama Touch ID-ka iPhone cusub. Waxay bilaabeysaa iPhone 5c midab cusub "mid dib loo rogay" oo soo jiita dhaleeceyn badan oo ah inuusan aheyn iPhone-ka raqiiska ah ee dad badani moodayeen.
iPhone 6 iyo 6 Plus (2014): Apple waxay soo saartay laba nooc oo iPhone ah oo leh 4,7 iyo 5,5 inji, taasoo keeneysa kororka iibka cajiibka ah ee suuqyada Aasiya.
iPhone 6s iyo 6s Plus, SE (2015): mar kale horumar xagga awoodda iyo kamaradda ah, waxayna soo bandhigaysaa tikniyoolajiyad cusub oo 3D Touch ah oo loogu talagalay shaashadda, iyadoo la ilaalinayo isla naqshadda. IPhone SE wuxuu noqdaa iibiyaha ugu fiican ee leh noocyadiisa wanaagsan iyo shaashadda 4-inji ah.
iPhone 7 iyo 7 Plus (2016): oo leh naqshad ku dhowaad la mid ah labadii sano ee la soo dhaafay, waxay soo bandhigaysaa kamarad labalaab ah tii weyneyd, waxay baabi'ineysaa badhanka bilowga mashiinka waxayna baabi'ineysaa qalabka dhegaha.
Laga soo bilaabo iPhone OS ilaa iOS 10, toban sano oo horumar ah
IPhone-ka waxba ma noqon laheyn la'aantiis nidaamka qalliinka, in kasta oo xaqiiqda ah in bilowgu aanu sahlaneyn. Isbedelka macruufka sanadihii la soo dhaafay wuxuu ahaa mid cajiib ah sida qof walba u arki karo si fudud adoo dib u fiirinaya si loo ogaado wax walba oo ka beddelay iPhone-kii asalka ahaa wixii aan hadda haysanno.
iPhone OSWaa waxa Apple asal ahaan loogu yeeray nidaamka hawlgalka iPhone, oo ah mid ka soo jeeda OS X, oo ay waxyar kadib u magacawday macruufka. Haa App Store, malaha dukaan iTunes ah oo keliya sacabbada codsiyada asaliga ah.
macruufka 2: sanad kadib App Store aakhirki wuu yimid oo waxaa suuragal ah in lagu rakibo codsiyada ka imanaya horumariyeyaasha loogu talagalay gaar ahaan iPhone-ka. "Waxaa jira barnaamij loogu talagalay tan" isla markiiba waxay noqotay weedho soo noqnoqota. Bogag badan oo ka mid ah shaashadda weyn, taageeridda dukumiintiyada qaab Office ah, ogeysiisyada riixaya ee loogu talagalay Boostada, shaashadaha shaashadda iyo awoodda lagu keydin karo sawirrada Safari ee shaashadda ayaa ahaa kuwa cusub.
macruufka 3: wuxuu ahaa mid ka mid ah cusbooneysiinta ugu muhiimsan, oo ay ku jiraan waxyaabo badan oo ka mid ah astaamaha ay isticmaaleyaashu dalbanayeen muddo dheer, sida awoodda wax loo jaro, nuqul iyo dhaji ama duubista fiidiyowga. Codsiga farriimaha, Compass iyo Find my iPhone waxay ahaayeen waxyaabo kale oo cusub oo lagu soo daray. IOS 3.2 wuxuu ahaa nuuca ugu horeeya ee Ipad uu keenay rakibay.
macruufka 4: Cusboonaysiin kale oo weyn oo FaceTime u keentay iPhone-ka, suurtagalnimada abuurista faylal lagu abaabulo codsiyada, iBooks iyo Xarunta Ciyaaraha. Hawlaha badan ayaa ugu dambeyntii u oggolaaday dadka isticmaala inay beddelaan codsiyada iyadoon loo xirin midka ay isticmaalayeen.
macruufka 5: nolosheeda ugu weyn waxay ahayd Xarunta Ogeysiinta. Waxa kale oo ku jiray barnaamijyo cusub sida Kiosk iyo Reminders, Apple-na waxay bilawday iMessage, nidaamkeeda ay ugu dirto farriimaha degdegga ah ee internetka iyada oo aan wax kharash ah lagala qaadin hawlwadeenkaaga.
macruufka 6- Had iyo jeer waxaa lagu xusuusan doonaa daahfurka arjiga khariidadaha. Apple waxay ka tagtay Khariidadaha Google oo waxay dooratay xalkeeda u gaarka ah, oo leh xoogaa natiijooyin xun markii ugu horreysay. Waxay ahayd waxa shaqadu ku baxday Scott Forstall, abuuraha IOS, oo ay ahayd inuu ka tago shirkadda.
macruufka 7: Bixitaankii Scott wuxuu ula jeeday ka tagitaankii "eskeumorphism" si uu ula qabsado qaab wali socda. Astaamo badan oo midabbo badan leh oo ka tagaya jilicsanaanta iyo sooyaal alwaax ah ayaa ahaa isbeddel aan dhammaan adeegsadayaashu soo dhoweyn oo xitaa maanta weli waxaa jira dad nostalgic ah oo u ooman qaabkii hore. Xarunta Xakamaynta iyo kaararka shaqooyinka badan ayaa sidoo kale ku yimid qaabkan.
macruufka 8: Conitnuity waxay fududeysay in hawl laga wareejiyo iPhone-ka ilaa Mac-ga iyo dhanka kale. Koodhadhka saddexaad ayaa sidoo kale u yimid App Store, iyo sidoo kale iCloud Drive, si uu awood ugu yeesho gelitaanka faylasha daruuraha ku jira iPhone-kaaga iyo Mac-gaaga.
macruufka 9: Apple Pay ayaa timid, madal bixinta lacag bixinta ee Apple oo kuu ogolaaneysa inaad ku bixiso iPhone-kaaga. Night Shift wuxuu wax ka beddelay midabka shaashaddaada habeenkii isagoo tirtiray codadkii buluugga ahaa, hagaajinta Siri iyo arjiga wararka (oo aan weli ka fileyno meelo badan). 3D Touch ayaa loo oggol yahay abuurista tuuryo yaryar shaashadda guriga adigoo gujinaya astaamaha.
macruufka 10: Siri wuxuu ugu dambeyntii furay barnaamijyada saddexaad, Sawirradu waxay kasbadeen waxoogaa hawlo cusub ah sida samaynta xusuusyo si toos ah ula socda sawirradaada, Apple Music ayaa beddelay nashqadihiisii ​​iyo Codsiga Gurigu wuxuu u muuqday markii ugu horreysay si loo xakameeyo HomeKit
Isbeddelkuna wuxuu ku sii socdaa iOS 11 deyrtan, oo leh Xarunta Xakamaynta cusub ee la beddeli karo, codsi cusub oo faylal ah oo ugu dambayntii ah sahamiyaha faylka wanaagsan ee macruufka, qalabka cusub ee loogu talagalay horumariyeyaasha sida ARKit iyo sirdoonka macmalka ah ee qaadaya tallaabooyinkooda ugu horreeya ee iPhone.
Toban Sano oo Guul aan lala tartamin ah
Lambarada iPhone-ku aad bay u naxdin badan yihiin oo runtii waxaad iyaga siin kartaa oo keliya qiimaha ay u qalmaan markaad isbarbar dhigto alaabada kale ee caanka ah. Ma leeyihiin caruusado badan oo Barbies ah oo ka iibsan iPhone-ka? Xaqiiqdu waxay tahay, in kastoo ay umuuqato been, maya. IPhone kaliya kuma iibin unugyo badan aduunka oo dhan marka loo eego caruusadda caanka ah ee Mattel (1.200 bilyan iyo 1000 bilyan), laakiin sidoo kale waxay sameysay waqti aad u yar (10 sano iyo 60 sano). Zippo waxay qaadatay in kabadan 80 sano inay iibiso 600 milyan oo laydh, iyo shirkada Sony oo leh PlayStation waxay kaliya iibisay sadex meelood meel Apple iyo iphone-keeda laba jeer.
Shirkadda wax badan baa iska beddelay tan iyo markii la bilaabay iphone-ka sidoo kale. Haysashada shey sidan oo kale ah buuggaaga waxay kaa dhigeysaa lama huraan inaad gebi ahaanba beddesho qaabka ganacsigaaga. Waxay u egtahay inaad haysato ciyaaryahanka ugu fiican adduunka kooxdaada oo aad iska dhigto inaadan ku tiirsaneyn inuu kuguuleysto koobab. Sanadkii 2006 Apple waxay ku saleeysay dakhligeeda si isku mid ah iPod iyo Mac. Waqtigan xaadirka ah IPhone wuxuu leeyahay 63,4% dakhliga Apple, waxaanan ka hadlaynaa balaayiin doollar rubuc. Macs, si heer sare ah sheyga tixraaca shirkadda illaa imaatinka iPhone, hadda kaliya waxaa lagu xisaabiyaa 10% wadarta dakhliga, iyo alaabada kale ee ku tiirsan iPhone, sida AirPods ama Apple Watch, waxay qeyb fiican ka yihiin faa'iidooyinka shirkadda maanta.
Haddii aan ka hadlayno tirooyinka saxda ah ee aan ka hadlayn boqolleyda, tirooyinku waa kuwo qalloocan. Iibka ayaa ka kordhay 19.000 milyan sanadkii 2006 ilaa 215.000 milyan sanadka 2016, oo leh faa iidooyin ka kordhay 1.990 milyan oo ka badan 45.000 milyan, oo hadda haysta lacag caddaan ah 237.000 milyan oo doollar, oo ah 6.390 milyan 2006.
Toban sano oo dhalaalaya laakiin sidoo kale leh hooska
Guusha iPhone inta lagu gudajiray tobankan sano meel ugama tagi karto in sidoo kale ay hadh jireen. Manzana Waxa uu sameeyay khaladaad muhiim ah muddadan, qaar ka mid ah oo uu ku guuleystay in uu si xushmad leh u xaliyo, qaarna aan sidaa u badnayn. Waxaan horey u soo sheegnay fiasco-ka khariidadaha oo leh iOS 6 ama Antennaagate-ka iPhone 4, laakiin waxaan soo bandhigi karnaa dhowr guul-darrooyin kale oo shirkadda xilligan.
Midka ugu hadal haynta badan ee calaamadeeyay Apple tan iyo markaas wuxuu ahaa hoos udhaca qiimaha IPhone-kii asalka ahaa. Waxaa lagu bilaabay qiimo dhan $ 600, kaliya labo bilood ka dib Apple waxay qaadatay go'aan ah inay hoos ugu dhigto $ 200, tallaabadaas oo ay u maleyneyso inay gacan ka geysaneyso kor u qaadista iibka aaladda oo ay soo dhaweyn doonaan iibsadayaasha. Xaqiiqdu waxay tahay in qulqulka emayllada iyo wicitaanada ka cabanaya qiimo dhimista kuwa horey u iibsaday iPhone ay taasi ahayd Apple waxay qaadatay go'aanka ah inay siiso $ 100 kaararka hadiyadaha kuwa bixiyay qiimaha asalka ah. Waxay u muuqataa in maqnaanshaha iibka ee Apple ay sabab leedahay.
Miyaad qiyaasi kartaa waxa ay la macno tahay inaad ka tagto iPhone-ka oo aan weli lagu bilaabin baarka? Waa hagaag taasi waa wixii ku dhacay Gray Powell 2010 kii oo leh iPhone 4. Markii aan wali garanaynin, wuxuu ilaaway noocyadan baarka ah, waxayna soo gashay gacanta Gizmodo $ 5.000 iyo, sida iska cad, ma uusan sameynin ka waaban inaad daabacdo sawirro faahfaahsan oo ku saabsan terminalka lix toddobaad ka dib markii la bilaabay. Powell lama eryin inkasta oo aan qiyaasi karno, laakiin Jason Chen (tifaftiraha Gizmodo) wuxuu arkay aqalkiisa oo la baarayo aad u xoog badan koox khaas ah oo fal dambiyeed tiknoolajiyadeed ka qaadatay qalab kumbuyuutar badan. Dhaleeceynta Apple ma ahayn mid dheer in la yimaado, iyada oo lagu eedeynayo in ay noqotay wixii ay ku dhaliishay inta badan shirkadaha kale.
Hal calaamadood oo dheeri ah oo muujinaya in dabeecadda aadanaha gabi ahaanba aan la saadaalin karin oo aan dhawaanahan haysanno Go'aanka Apple ee ah inay ku darto album U2 buuxa dhammaan isticmaaleyaasha koontada iTunes. Wixii markii hore umuuqday hadiyad aan cidina diidi karin waxay noqotay (markale) cambaareyn canbaareyn ah markii isticmaaleyaal badan ay si lama filaan ah uga heleen albumka maktabadooda muusikada iyagoon sameyn wax ay ku soo dejistaan. Xitaa Bono waa inuu raaligelin ka bixiyo xaqiiqdaas.
IPhone 8, talaabada xigta
Waxaa jira kaliya seddex bilood oo ka haray soo bandhigida iPhone-ka soo socda 8. Sida ku xusan wararka xanta ah waxay noqon doontaa isbedel xagjir ah marka loo eego noocyadii hore, luminta badhanka bilowga sumcadda leh iyo naqshadeynta taas oo ficil ahaan hore oo dhan u noqon doonta shaashad gaaritaanka cabir shaashad ah sida kan iPhone 7 Plus oo leh qalab cabirkiisu la mid yahay iPhone 7. Lacag la'aan wireless, sawirka faraha oo isku dhafan shaashadda, shaashadda AMOLED, dareemayaal 3D ah, Xaqiiqada la kordhiyay ... liiska shaqooyinka cusubi waa inta lafilayo. Laakiin taariikhda sanad walba waa lagu soo celin doonaa: jacayl iyo niyad jab qaybo isla eg, in kasta oo ay noqon doonto iibiyaha kale ee ugu fiican.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Telefoon » Mobiles » IPhone wuxuu u dabaaldegaa 10 sano oo hogaaminaya
Waxay calaamadeysay wadada !!
Waa run in 2007-dii Apple ay calaamadeysay taariikh taariikhi ah sanado badana ay dejineysay xilliga taleefannada casriga ah, laakiin nasiib darro hadda Samsung ayaa ka sarreysay oo caddeynta ayaa ah in sida ku xusan sirta iPhone 8 uu 'aad' u noqon doono samsung s8. Waqtiga ku meel gaarka ah waqtigan waxaa dejiyay Samsung, ufff haddii Steve Jobs uu madaxa kor u qaaday …….
Ku jawaab joancor
Aad baan uga helay maqaalkan.
Aad u dhameystiran, cusbooneysiiyay oo sifiican loo diiwaangaliyay!
Waa run in taleefanka gacantu uu u yimid inuu wax ka beddelo fikradda qof kasta oo ah aalad caqli badan, kaliya ma ahan taleefanka gacanta, laakiin sidoo kale kombiyuutarada iyo kuwa kale.
Aad baad u mahadsantahay waxaanan la socon doonaa Blog-kan wanaagsan.
Jawaab ku sii Andrés R.
Qualcomm wuxuu kacaan suuqa kula dareemaaha sawirka faraha aan la arki karin
NotPetya waa furaha cusub ee furaha geliya shirkadaha